रेडियो कार्यक्रम साझा बोली - MeroReport
रेडियो कार्यक्रम साझा बोली
पारस्परिक जवाफदेहिता कार्यक्रमद्वारा समुदायका लागि उत्पादित रेडियो कार्यक्रम साझा–बोली (काठमाण्डौं संस्करण) को २० औँ अंक रेडियो नेपालबाट यहि २०७४ साल भदौं २४ गते अर्थात सेप्टेम्बर ९, २०१७ मा र देशभरका ३४ जिल्लाका बिभिन्न ४० वटा स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरु बाट भदौं २५ गते आइतबार तद् अनुसार सेप्टेम्बर १०, २०१७ मा प्रसारण हुँदैछ । साझा बोलीको यो अंकमा सार्बजनिक निकाय र पारदर्शिताको बारेमा गरिएको छलफल र रेडियो सामग्रीहरु सुन्न सक्नु हुन्छ ।
कार्यक्रमले उठान गरेका सवालहरु
१. सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायहरु भनेका के के हुन्छ ?
२. सार्वजनिक निकायहरु किन पारदर्शी हुनुपर्छ र जवाफदेहितासंग यसको के सम्बन्ध छ?
३. पारदर्शिताले सुशासन कायम राख्न, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुन नदिन के कसरी योगदान गर्छ?
४ पारदर्शी नहुने सार्वजनिक निकाय अथवा त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनले के कस्तो दण्ड सजायको ब्यवस्था गरेको छ र पारदर्शिताका लागि नागरिक समाजको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ?
यी सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रम भित्र निम्न विषयबस्तु तथा सामग्रीहरु समेटिएकेछ ।
तपाईका ठाउँको सार्बजनिक निकायहरु कत्तिको पारदर्शि छन् ? पारदर्शिताका लागि सार्बजनिक निकायले गरेका त्यस्ता तपाईलाई थाहा छ ? भन्ने प्रश्नमा रुकुम अर्घाखाँची र काभ्रेका नागरिकहरुको आवाज ।
२. रेडियो सामाग्री
सार्बजनिक निकायले पारदर्शिताका लागि के के अभ्यास गरिरहेका छन् ? सार्बजनिक निकायले नियमित रुपमा सार्बजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण जस्ता कार्यहरु गरेको छ कि छैन ? कुन समयमा कसरी सम्पन्न गर्ने गर्छ ? सार्बजनिक निकायले नागरिक वडापत्र, सूचना पाटि, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? सार्बजनिक निकायले कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमहरु गर्नु अघि र सम्पन्न भएपछि त्यसको जानकारी नागरिकलाई कसरी गराउँदछ ? पारदर्शिताले सुशासन कायम राख्न, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुन नदिन के कसरी योगदान गर्छ ? जस्ता सवालमा आम नागरिक, स्थानीय तह र विषयगत कार्यलयका कर्मचारीहरु, नागरिक समाज संस्थाका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरुसंगको कुराकानीमा आधारित रेडियो सामाग्री ।
पारदर्शिता नै के हो ? सार्बजनिक निकाय पारदर्शि हुन किन जरुरी छ ? सार्बजनिक निकाय पारदर्शि हुँदा कसलाई के फाईदा पुग्छ ? सार्बजनिक निकायमा हुने क्रियाकलपाहरु पारदर्शि गराउन नागरिकको र नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ ? उनीहरुले कसरी खबरदारी गर्न सक्छन् ? लगायतका बारेमा गोगो फाउन्डेसनका अध्यक्ष केदार खड्कासंग गरिएको कुराकानी ।
४. स्थलगत रिपोर्ट
म खाँदिनू भन्ने अभियाननै के हो ? किन गरिएको हो ? यो अभियानमा को को सहभागि भएका छन् ? सहभागि मध्ये को को ले के भने, के प्रतिवद्धता गरे लगायतका कुराकानीलाई समेटेर स्थलगल रिपोर्ट ।
५. श्रोता सहभागिता
काभ्रेको कुशादेवी ३ पनौतीमा रहेको बिहावर रेडियो श्रोता समूहका साथीहरुले पनि सेप्टेम्बर ८ तारिखका दिन आफनै पहलमा आफनो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई म खाँदिन भन्ने प्रतिवद्धता गराउनका लागि आफनै पहलमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उनीहरुले यो अभियान किन र कसरी सम्पन्न गरे भन्ने बारेमा सहजकर्ता समुन सापकोटाको भनाई ।
रेडियो नेपालबाट यहि २०७४ साल भदौं २४ गते अर्थात सेप्टेम्बर ९, २०१७ का दिन, बिहान ८ बजेको अंग्रेजी भाषाको समाचारपछि, यसैगरी उज्यालो एफएम ९० Mhz ललितपुरबाट हरेक सोमबार बेलुकी ७ :३० बजे पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ ।
साथमा निम्न एफएम स्टेशनहरुबाट समेत हरेक साता निम्न बार र समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ :
१. सामुदायिक रेडियो मदन पोखरा १०६.९ Mhz पाल्पाबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
२. रेडियो स्वर्गद्वारी एफएम १०२.८ Mhz दाङबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
३. रेडियो कृपालु एफएम ९९ Mhz प्युठानबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६:३० बजे
४. रेडियो सानो भेरी एफएम १००.८ Mhz रुकुमबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६:३० बजे
५. रेडियो भेरी एफएम ९८.६ Mhz सुर्खेतबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
६. दिनेश एफएम ९३.८ Mhz कैलालीबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
७. रेडियो रामारोशन ९२.० Mhz अछामबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
८. रेडियो निङ्गलाशैनी एफएम ९४ Mhz बैतडीबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६:३० बजे
९. रेडियो हाम्रो पाइला एफएम ८७.९ Mhz जाजरकोटबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
१०. रेडियो समानता एफएम १०५.४ Mhz कपिलवस्तुबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ : ३० बजे
११.हजुरको रेडियो १०२.१ Mhz रामेछापबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
१२.प्राइम एफएम १०४.५ Mhz काभ्रेबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७:३० बजे
१३. नुवाकोट एफएम १०६.८ Mhz नुवाकोटबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६ बजे
१४.रेडियो थाहा सञ्चार ९९.६ Mhz मकवानपुरबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६:३० बजे
१५. रेडियो गोर्खा एफएम ९२.८ Mhz गोरखाबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
१६. रेडियो सिन्धु एफएम १०५ Mhz सिन्धुपाल्चोकबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
१७. रेडियो लामटाङ एफएम ९०.३ Mhz रसुवाबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६ बजे
१८. रेडियो सैलुङ एफएम १०४.० Mhz दोलखाबाट हरेक आइतबार बेलुकी ७ बजे
१९. नेपालगञ्ज एफएम १०४.८ Mhz बाँकेबाट हरेक आइतबार बेलुकी ६:३० बजे
२०. उज्यालो एफएम ९० Mhz ललितपुरबाट हरेक सोमबार बेलुकी ७ :३० बजे
२१. रेडियो सुर्योदय एफएम ९४ Mhz अर्घाखाँचीबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६:३० बजे
२२. रेडियो रेसुंगा एफएम १०६.२ Mhz गुल्मीबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: १५ बजे
२३. रेडियो गुर्बाबा एफएम ८९.७ Mhz बर्दियाबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६ : ३० बजे
२४. रेडियो ध्रुवतारा एफएम ८९.८ Mhz दैलेखबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: ३० बजे
२५.रेडियो रोल्पा एफएम ९३.८ Mhz रोल्पाबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
२६. सुक्लाफाँटा एफएम ९९.४ Mhz कञ्चनपुरबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६ बजे
२७. रेडियो सुदुर आवाज ९५.० Mhz डडेल्धुराबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: ३० बजे
२८. रेडियो हाम्रो पहुँच ८९.० Mhz दाङबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
२९. रेडियो शारदा एफएम ९९.२ Mhz सल्यानबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६ :३० बजे
३०. रेडियो त्रिवेणी एफएम ९४.४ Mhz डोटीबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६:३० बजे
३१. टिकापुर एफएम १०१.० Mhz कैलालीबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
३२. रेडियो हाईवे एफएम १०३.५ Mhz दाङबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: ३० बजे
३३. रेडियो परिवर्तन एफएम ८९ Mhz कपिलवस्तुबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: ३० बजे
३४. सामुदयिक रेडियो रमाईलो १००.६ Mhz ओखलढुंगाबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
३५. रेडियो मेलम्ची एफएम १०७.२ Mhz सिन्धुपाल्चोकबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
३६. रेडियो जनसञ्चार एफएम १०७.९ Mhz भक्तपुरबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
३७. सामुदायिक रेडियो शिद्धबाबा ९८.४ Mhz सिन्धुलीबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६: ३० बजे
३८. रेडियो धादिङ १०६.० Mhz धादिङबाट हरेक आईतबार बेलुकी ६ बजे
३९. रेडियो बारपाक १०६.४ Mhz गोरखाबाट हरेक आईतबार बेलुकी ७ बजे
४०. मेरो एफएम ९३.५ Mhz काठमाण्डौबाट हरेक सोमबार बिहान ८ बजे
तपाइ यो कार्यक्रम हाम्रो वेबसाईट http://equalaccess.org.np/archives/podcast/sajha-boli-episode-20 मा क्लिक गरेर या गुगलड्राईभ https://drive.google.com/file/d/0B4WW2Tr3EBi_WUx6djJwT2ltcWc/view?ts=59b2a574 मा क्लिक गरेर पनि सुन्न अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाई हामीलाई आफ्नो मनमा लागेका कुराहरु फोन मार्फत पनि भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि हाम्रो फोन नम्बर हो NTC प्रयोगकर्ताका लागि फोन नम्बर १६–६०–०१–००–४–५–९ र NCELL प्रयोगकर्ताका लागि ९८–०११–२२–३९७ । यो नम्बरमा मिस्डकल गरेपछि तपाईलाई यतैबाट कल आउँछ । अनि तपाईले त्यो कल उठाईसकेपछि त्यहाँ भनिए अनुसार आफ्ना कुराहरु रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ । पुनश्च: यो नम्बरमा फोन गर्दा तपाईले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
साझाबोली समुहका तर्फबाट